मेयर राई भन्छन मोरङमा कर्णालीमा जस्तै विकट गाउँ पनि छन् – Letang Khabar
» अन्तरबार्ता » प्रमुख समाचार » हेडलाइन
मेयर राई भन्छन मोरङमा कर्णालीमा जस्तै विकट गाउँ पनि छन्
Letang Khabar मंगलबार, पौष ०३, २०७५
लेटाङ ३ पूष । उत्तरी मोरङको लेटाङ नगरपालिका भूगोलको हिसाबले जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । २ सय १९ दशमलव २३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लेटाङमा ३२ हजार ५३ जनाको बसोवास रहेको छ । पहाडी, गाविसहरू भोगटेनी,वारङ्गी र जाँतेका आधा वडाहरू साविकको लेटाङ गाविसमा समाहित गरी नगरपालिका बनाइएको हो । पर्यटन उद्योग, पशुपालन र कृषि क्षेत्रको पर्याप्त सम्भावना रहेको लेटाङ नगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि नगरमा भएका विकास निर्माण र मानव संसाधनमा भएको सुधारका विषयमा नगर प्रमुख शंकर राईसँगको कुराकानी ।
० मानव संसाधनका क्षेत्रमा नगरपालिका के गरिरहेको छ ?
०अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसेको भन्नुभयो रु बाधा को बाट भइरहेको छ ?
–नीतिगत रुपमा सिंहदरवार गाउँमा आएकै हो । अधिकार पनि स्थानीय तहले नपाएको भन्न मिल्दैन । तर,बजेट जति सबै संघीय सरकारले राखेर गाउँमा सिंहदरवार आउँदैन । अघिल्लो वर्ष भन्दा दुई करोड कम बजेट आयो । जन अपेक्षा चुलिएका छन् । सडक र विद्युत बिस्तारको माग बढेको छ । जनतालाई आर्थिक रुपमा बलियो नबनाई करको दर बढाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी आर्थिक समृद्धि सम्भव छ रु